Global Voices teny Malagasy · 1 Avrily 2019
01 Avrily 2019
Tantara tamin'ny 01 Avrily 2019
Feo mpitarika i Alaa teo amin'ny bilaogera ejiptiana sy mpikatroky ny teknolojia tao Kairo rehefa antomotra sy nandritra ny revolisiona ejiptiana.
Tari-dia: Toro-hevitra SEO ho an'ireo bilaogera mpanandra-teny
Mediam-bahoaka01 Avrily 2019
Ny Global Voices Advocacy dia faly amin'ny famoahana ny andiany faha-telo amin'ny Toro-lalana Advocacy 2.0: toro-hevitra SEO ho an'ireo bilaogera Advocacy : Ahoana no fampiharana ny fanatsarana amin'ny milina fikarohana ny fampitomboana ny isan'ny mpamaky anao sy hisarihana olona bebe kokoa.
Mikasa ny hamonjy ilay ‘reny tena mahafinaritra indrindra eto ambonin'ny tany’ ao amin'ny tobin'i Shina ny lehilahy Uyghur iray
Shina01 Avrily 2019
"Tsy misy dingana arahina, tsy misy fitsarana, ary tsy misy mahafantatra hoe rahoviana izy ireo no hivoaka."
Noraràn'i Bahrain ny vondrona chat amin'ny BlackBerry
Bahrain01 Avrily 2019
Takiana ankehitriny ny vondrona chat BlackBerry mba hahazo fahazoan-dàlana sahaza avy amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fampahalalam-baovao alohan'ny hamelana azy ireo hanohy ny asa.
Nanakatona ny bilaogin'ilay mpikatroka mpandala ny zon'olombelona i Syria
Syria01 Avrily 2019
Nosakanan'ny manampahefana Syriana ny fidirana tao amin'ny bilaogin'ilay mpikatroka mafàna fo mpiaro mpiaro ny zon'olombelona sady bilaogera Mohammad Al-Abdallah, 26 taona izay nibilaogy tao amin'ny Raye7wmishRaj3 (Lasa aho ary tsy hiverina). Afaka nidirana ilay bilaogy voasakana tamin'ny alàlan'ny HTTPS na tamin'ny alàlan'ny http://rwmr.wordpress.com/